धर्ति माता पोखरामा आउदा यस्तो भयो ! देउता बोल्न थाले ,मातालाई भेट्दा रुवाबासी(भिडियो) -
Home News धर्ति माता पोखरामा आउदा यस्तो भयो ! देउता बोल्न थाले ,मातालाई भेट्दा...
मेरी आमा तीन महिनाको गर्भवती रहँदा बुवाले माइतीमा छाडेर हिँडेका थिए । म जन्मेको डेढ वर्ष हुँदासम्म बाबाले यो सन्तान मेरो होइन भनेर जिम्मा लिन मान्नुभएन । खासमा वहाँलाई छोरा जन्मियोस् भन्ने रहेछ । आमाले मलाई माइतमै राखेर स्याहार गर्नुभयो ।
त्यो बेलामा धेरै घाँस काट्न नसकेपछि ढिकाबाट घचेडेर तलसम्म झारेको भर्खर जस्तो लाग्छ । सायद त्यही भएर पनि होला भगवानकी प्यारी भएर रुखमुनी बसेर संसारको ज्ञान लेखे, संसारको ध्यान लेखेँ ।मान्छेहरु ठगी खाने माता भन्छन् । मैले धेरै पैसा बैंकमा राखेको रेकर्ड छैन । दाजु भाईले दिएको चारपाँच तोला सुन छ ।
Previous articleकाठमाडौंको एउटा कोठमा3दिदि बहिनी यस्तो अव”स्थामा भेटिए
Next articleGyanendra Shah भ”र्खरै काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, राजा’वादीहरुको वि”शाल प्र’ र्दशन, हजारौँ सर्म’थकसँगै निस्किए (भिडियो हेर्नुहोस्)